Press Release – Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban
Home &sol; News &sol; Archive by category "Press Release"
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) wuxuu u arkaa doorashada maanta oo Sabti ah, 10ka Diseember 2016ka ka dhacday magaalada Jowhar inay tahay mid si ayaan darro ah ku qabsoontay oo aan isla markaasna waafaqsaneyn xeerka doorashooyinka. Guddiga oo tixraacaya warqaddii guddigu horey uu soo saaray 7dii Diseember ee lagu shaaciyay go’aanka laga gaaray Kursiga Beesha Jidle, wuxuu caddeynayaa in Guddiga Dowlad Goboleedka Doorashooy...
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada Dadban (GXKHDD) oo si wadajir ah u qorsheynaya tallaabooyin isku dubbaridan oo wax looga qabanayo is dabamarin doorasho oo halis ah. Guddiyada GFHDD iyo GXKHDD waxay hoosta ka xarriiqayaan horumarka illaa iyo hadda laga gaaray geeddi socodka doorashada ee 2016ka. Codaynta kuraasta Aqalka Hoose waxay ku dhowdahay gabagabo, waxaana qabsoomay dooras...
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashada Dadban (GFHDD) waxa uu shaacinayaa in Guddi isku dhaf ah oo ka kooban, Guddiga Qaran ee Amniga Doorashooyinka iyo Guddiga doorashooyinka ay 20kii bishaan booqdeen magaalada Jowhar, oo ay ka dhaceen rabshado doorashada la xariira 18 kii bishaan Nofember. Waxa ay halkaasi kula kulmeen guddiyadu maamulka Hirshabeelle iyo musharixiinta u tartamaya kuraasta xildhibaanimo oo ay mar labaad u aqriyeen xeerka Ansha...
WAR SAXAAFADEED – 7da NOFEEMBER, 2016
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) wuxuu shaacinayaa inay doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka ee 2016ka maalinta berri ah oo ay taariikhdu tahay 8da Nofeember ka billaaban doonto wajigeeda koowaad magaalada Baydhabo ee xarunta Dowlad Gobaleedka Koofur Galbeed. Wajiga koowaad ee doorashada waxaa loo codeyn doonaa 23 kursi oo 4 ka mid ahi haween kaliya u tartamami doonaan. Guddigu waxa ...
WAR SAXAAFADEED – 6ta NOFEEMBER 2016
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) waxaa uu soo dhaweynayaa una hanbalyeynayaa Dowlad Gobaleedka Hirshabeelle oo ku guuleystay in uu soo magacaabo xubnaha u tartamaya siddeedda kursi ee u matalaya Aqalka Saree ee baarlamaanka. Guddigu waxa uu ku ammaanayaa maamulka Hirshabeelle sida uu u soo buuxiyey matalaadda haweenka ee Aqalka Sare iyadoo siddeedda xubnood ay labo ka mid ah u asteeyeen in haween kaliya u tartamaan s...
WAR SAXAAFADEED – 31ka OKTOOBAR 2016
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) oo gudanaya waajibka loo igmaday ee kormeerka hannaanka doorashooyinka iyo xaqiijinta in doorashooyinka si isku mid ah uga dhacdo dalka, wuxuu safarro xaqiiqa raadin iyo qiimeyn ah ku tagay deegaan doorashooyinka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, iyada oo si la mid ah deg deg loo soo kormeeri doono deegaan doorashooyinka dhimman. Safarradaan ayaa ujeedadoodu tahay hubinta in doorashooyinku dal...
WAR SAXAAFADEED – 20 OKTOOBER 2016
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashada Dadban (GFHDD) waxaa uu soo dhaweynayaa dowlad gobaleedyada Puntland iyo Koofur Galbeed oo ku guulestay in ay soo doortaan Xubnihii u matalayey aqalka sare wuxuuna guddigu ugu hambalyeynayaa sida ay ugu dadaleen in ay qondada haweenkana soo buxiyaan. Guddigu sidaas oo kale wuxuu soo dhaweynayaa dowlad gobaleedka Jubbaland oo ku gulaysatay in ay doorato xubnihii u matali lahaa aqalka sare. Guddigu waxaa uu ...
WAR SAXAAFADEED – 16 OKTOOBER 2016
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashada Dadban (GFHDD) waxaa uu soo dhaweynayaa una hanbalyeynayaa Dowlad Gobaleedka Galmudug oo ku guuleystay in uu soo doorto siddeedii xubnood ee u matalayey Aqalka Saree ee barlamaanka. Guddigu waxa uu ku ammaanayaa Galmudug sida uu u soo buuxiyey qoonddadii haweenka ee Aqalka Sare iyadoo siddeedda xubnood ay labo ka mid ah ay yihiin haween. Guddigu waxaa uu ugu baaqayaa Dowlad Gobaleedyada Puntland iyo Koofur...
WAR SAXAAFADEED – 5 OKTOOBER 2016
Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GFHDD) wuxuu caddeynayaa in maanta oo ah 5ta bisha Oktoobar 2016ka is la markaasna ah maalintii loo muddeeyey in Maamullada Dowlad Gobaleedyadu ay soo gudbiyaan magacyada musharraxiinta Aqalka Sare in aysan suuro gelin. Sababtuna ay tahay Maamullada oo aan weli soo gudbin magacyada musharraxiinta. Sidaasi darteed waxaa guddigu ugu baaqayaa mas’uuliinta Maamul Gobaleedyada in ay labo maalmood gudahood...
WAR SAXAAFADEED: Qabashada Lacagaha Is-diiwaan Galinta Musharraxiinta
Qabashada Lacagaha Is-diiwaan Galinta Musharraxiinta Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Dadban ee heer Federaal waxaa uu ku faraxsan yahay in uu idiin soo bandhigo akoon bangi ah ee loola dan leeyahay qabashada lacagaha is-diiwaan galinta musharraxiinta u tartamayo kuraasta baarlamanka Soomaaliya ee soo socdo. Fadlan hoos ka eeg macluumaadka akoonka. Musharraxiinta Aqalka Sare Dadka doonaya in ay isu sharraxaan kuraasta Aqalka Sare waxaa is-diwaa...